Ento miakatra ity firenena ity – Malag@sy Miray
Samy nahatsikarika daholo ny rehetra ny amin’ny fiakaran’ny vidin’entana misy eto Antananarivo (sy manerana an’i Madagasikara?). Nosoratana ity lahatsoratra ity mba hilazana izany ary koa mba ahafahan’ny tsirairay mitatitra ny hitany any amin’izay misy azy any.
Ho an’ireo izay monina eto izany dia nahatsikarika fa toa ohatran’ny nifanome baiko ireo mpivarotra rehetra mba hampiakatra ny vidin’entana. Maro amin’ireo fiakarana no efa nampoizina fa tsy maintsy hitranga, anisan’izany ireto:
– ny lasantsy: efa ela ihany ireo mpanjinjara lasantsy no nimenomenona tamin’ny vidin’io lasantsy io ka nanao izay ho afany mba hampiakarana izany. Rehefa nifandrirarira teny izy ireo sy ny fanjakana dia niakatra ihany izany hany ka lasa toa izao ny vidiny amin’izao fotoana izao: Gasoil 2680 Ar, Essence 3240 Ar, Solika fandrehitra (pétrole) 2000 Ar . Raha ny siosion-dresaka re dia toa vao fiakarana voalohany ihany io, ary heverina fa mbola hisy ny fampiakarana hafa ato ho ato,
– ny Jirama: ity indray dia efa nomanina ihany koa ny mpanjifa tamin’ny alàlan’ny serasera fa hisy fiakarana ato ho ato. Raha ny fantatra dia hiakatra 17% ny vidin’ny herinaratra raha toa ka 14% izany ho an’ny rano. Eto moa izany dia mbola ny mpanjifa foana no mitatatra ho an’i Rainilezafy rehefa tsy nahomby ireo mpitantana nifanesy tao amin’ny Jirama.
Ankoatra izay dia toa tora-bato avy any an-danitra izay tsy nampoizina ireto fiakarana ireto:
– ny saram-pifandraisana antelefaonina izay niakatra 40% be izao. Mahagaga ihany hoe io sehatr’asa izay mandany vola be dia be amin’ny dokam-barotra io no tsy « nampiomana » akory ireo mpanjifa fa toa mamely tampoka toa izao.
– ny saribao fandrahoan-kanina moa dia tsy vitan’ny niakatra ny vidiny fa zara raha ahitana. Mahatratra any amin’ny 30 000Ar ka hatramin’ny 40 000 ariary ny gony iray izao raha toa ka latsaky ny 20 000 ariary izy izany talohan’ny nandalovan’ny rivo-doza Giovanna. Aiza ary ireo mpanao fikarohana amin’izao fotoana izao? Izao indrindra mantsy no fotoana tokony hampidirana vahaolana vaovao hanoloana ny saribao mba hikarakarana ireo sakafo any an-tokan-trano. Ny gaz toa tsy takatry ny sarambaben’olona satria dia efa ho 50 000 ariary ny tavoahangy 9kg amin’izao fotoana
Ho an’ireo PPN (iangaviana ireo mpandala ny teny malagasy mba hanome dikan-teny malagasy ny PPN azafady) indray kosa
– ny vary raha vidiana amin’ny kapoaka dia eo amin’ny 450ariary
– ny siramamy dia 3 000 ariary ny kilao
– ny tavoahangy menaka misarona nafarana avy any ivelany dia any ho any amin’ny 5500 ariary any ho any
Araka ny voalaza ery ambony dia tsy feno ireo lisitra ireo. Ny tanjona dia ny hanoratana azy mba ho lasa marika iray ahafahana mampitovy rehefa any aoriana. Aza misalasala mameno izay hitanareo any amin’ny toerana misy anareo tsirairay any avy (mariho ny vidiny sy ny toerana rehefa mametraka izany eto ambany ianareo)
Ny aty aminay zao taloha tsy andoavambola ny maka rano eny @ireny paompy ireny zao izy ty ankehitriny lasa andoavana 5ar isaky ny litatra zany hoe 20ar ny seau ary 50ar ny bidon tena tsy rariny mihintsy nefa ny rano no mamelona ny malagasy. de taloha ko ny aty aminay rehefa makeny @reny WC public reny tsy mandoha vola zany fa gratuit za lasa mipipi 50ar mikaka 100ar aiza mo no tsy haloto ny tanana fa to lasa eny @ poto sy kirihatra ala eny ny olona no manao ny malotony tsy rariny mintsy zany ry fanjakana fa mba asio fijerevana kely a.